Igqwetha le-NJ, iHackensack yeGqwetha lokuSebenza, intando yokugqibela kunye neTestamente
IJersey City Selectate igqwetha leLifa, ukuLungelwa, ukuTyala, iiTyala kunye neTrasti
ikhaya / IJersey City Selectate igqwetha leLifa, ukuLungelwa, ukuTyala, iiTyala kunye neTrasti
Njengegqwetha elitsha laseJersey, siya kukunceda uzuze iLitigation Litigation okanye ulungiselele uMyolelo wakho
Kwi-Ofisi yoMthetho kaPatel noSoltis, sinako ukunceda nangaziphi na iimfuno zepropathi yakho. Amagqwetha ethu anokukumela kwiingxabano malunga nentando kunye nethemba, ulawulo lwepropathi, okanye isimangalo esiqhubekekileyo kwi-Hudson County, Essex County, Union Union, Bergen County, Mercer County, Monmouth County, Morris County, Passaic County, Somerset County, okanye Middlesex County .
Imiceli mngeni yeTestamente Entsha (Izizathu zokucel 'umngeni kumyolelo onjengokunqongophala kobuchule bokwenza umyolelo, omnye uya kwenziwa kwaye ke om.)
yethu Abameli beLand Estate kwisiXeko saseJersey zibonelela ngenkonzo ekumgangatho uphakamileyo kunye nokuphendula kwinkonzo nganye yabathengi. Imbambano yakho ngendlu ingasombululwa ngommangalelwano okanye ngothethathethwano kwaye nangayiphi na imeko, siya kulwela thina. Siyaqonda ukuba ukuphulukana nomntu esimthandayo kunokuba lixesha lokuhlawuliswa ngokweemvakalelo kwaye oku kongeza uxinzelelo olongezelelekileyo kuye wonke umntu. Sisebenzela ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu baphathwa ngentlonelo. Siziqwalasele iimfuno zakho njengabaxumi bethu, kwaye asizukuphulukana nawe njengomntu kunye nemeko ofumana kuyo. Ukuba ufuna uncedo malunga nokuthengisa iipropathi zepropathi leyo singakuqinisekisa ukuba ufumana ezona mali zepropathi kwaye sikhusele iiarhente ngokusebenzisa enye yethu NJ Iarhente yokuvala indawo.
Kufunwa amagqwetha eNew Jersey ukusuka kwiNdlu yeNkundla
Nxibelelana neofisi yethu ukuze uthethe negqwetha laseNew Jersey nokuba singakunceda njani (973) 200-1111 okanye usithumele nge-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe].